च्याम्पियन्स लिग फाइनल आजः चेल्सी र सिटी को बलियो ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
च्याम्पियन्स लिग फाइनल आजः चेल्सी र सिटी को बलियो ?
एजेन्सी । आज राती युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेलमा दुई इंग्लिस क्लबबीच महाभिडन्त हुँदैछ। उपाधिका लागि उक्त भिडन्तमा चेल्सी र म्यानचेस्टर सिटी आमनेसामने हुँदैछन्। खेल नेपाली समयअनुसार शनिबार राति १२ः४५ बजे हुनेछ।
म्यानचेस्टर सिटीले यस सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ। चेल्सीले चौथो स्थानमा रहँदै सिजन सकाएको छ। दुबै टोलीको एकै लक्ष्य च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्नु हो। सिटी पहिलोपटक ऐतिहासिक उपाधि जित्ने दाउमा छ भने चेल्सी दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्ने यात्रामा छ। चेल्सी र सिटी दुबै टोली हाल सन्तुलित अवस्थामा रहेकाले अहिले नै उपाधिमाथि कसले कब्जा गर्ला अनुमान गर्न सकिँदैन ।
अन्तिम १६ मा मोन्चेङ्लाबाचलाई पन्छाउँदै अघि बढेको सिटीले क्वाटरफाइनल खेलमा जर्मनको बोरुसिया डर्टमण्डलाई पराजित गरेको थियो। सिटीले सेमिफाइनल खेलमा पिएसजीलाई स्तब्ध पार्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो।
त्यस्तै अन्तिम १६ को खेलमा ला लिगा च्याम्पियन एथ्लेटिको मड्रिडलाई हराउँदै अघि बढेको चेल्सीले क्वाटरफाइनल खेलमा पोर्टोलाई पाखा लगाएको थियो। सेमिफाइनल खेलमा उपाधि दाबेदार रियल मड्रिडलाई पराजित गर्दै चेल्सी फाइनल पुगेको थियो। फाइनलसम्मको यात्राका लागि दुई टोलीले उपाधि दाबेदार मानिएका क्लबहरुलाई स्तब्ध बनाएका थिए।
हालसम्म सिटी र चेल्सीले १ सय ६८ खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। तीमध्ये ७० खेल चेल्सीले जितेको छ भने ५९ खेल सिटीले जितेको छ। दुई टोलीबीचको ३९ खेल बराबरीमा सकिएको छ।
यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा चेल्सी सिटीभन्दा बलियो देखिएको छ। प्रिमियर लिगमा यस सिजन भएको दुई खेलमध्ये दुबै टोलीले एकएक खेल जितेका छन्। एफए कपको सेमिफाइनल खेलमा चेल्सीले सिटीलाई पराजित गरेको थियो।
उत्कृष्ट लयमा रहेका दुई टोलीबीचको उपाधि भिडन्त प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक बन्ने अनुमान छ। इतिहासलाई हेर्दा सिटीविरुद्ध चेल्सी हाबी हुन सक्ने अनुमान गरिएपनि वर्तमानमा सिटी उच्च लयमा छ। सिटीलाई पराजित गर्न निकै कठिन छ। घरेलु लिगको उपाधि जितेर हौसिएको सिटीको मुख्य उद्देश्य च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्नु हो।
- १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १५:४१ मा प्रकाशित